DHAGEYSO: Baaritaan lagu hayo Mas’uuliyiin Somali ah oo ku lug yeeshay darbiga Kenya ay dhiseyso – Fadeexo..? | Garqaad News Agency
DHAGEYSO: Baaritaan lagu hayo Mas’uuliyiin Somali ah oo ku lug yeeshay darbiga Kenya ay dhiseyso – Fadeexo..?
Dec 24, 2017 - Aragtiyood
Wararka naga soo gaarayo degmada Beled-Xaawo ayaa sheegaya in xaalada ay tahay mid degan ka dib markii seddexdii maalin ee la soo dhaafay ay ka taagneyd Xiisad u dhaxeysay dadka deegaanka iyo Ciidanka Kenya oo ka soo talaabay xadka doonayayna iney howlo bur burin ah ka sameeyaan Xuduuda degmadaasi ay la wadaagto Kenya.
Xaaladda degmada Balad-Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa Saakay waa ay aheyd mid degan kadib markii 3-dii maalin ee la soo dhaafay ay ka taagneyd xiisad u dhaxeysay dadka degmadaasi iyo Ciidanka Kenya oo howlo burburin ah ka bilaabay dhinaca xuduudka degmadaasi ay la wadaagto dalka Kenya.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in mas’uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Baladxaawo ay Ciidamada Kenya ku gacan siinayaan Xaaladda degmada Balad-Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa Saakay waa ay aheyd mid degan kadib markii 3-dii maalin ee la soo dhaafay ay ka taagneyd xiisad u dhaxeysay dadka degmadaasi iyo Ciidanka Kenya oo howlo burburin ah ka bilaabay dhinaca xuduudka degmadaasi ay la wadaagto dalka Kenya.
Maamulka Gobolka Gedo ayaa sheegaya in daba gal ay ku hayaan xubnahaas oo wali aan kiiskooda la caddeynin oo daba-gal lagu hayo markii ay ku caddaatana ku lug lahaanshaha arintaan ay ula dagaalami-doonaan iyaga iyo Kenya si isku mid ah.
Guddoomiye Ku xigeenka Gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in masuuliyiinta Maamulka degmada waxyaabihii ka soo baxana ay Warbaahinta la wadaagi doonaan.
Dowladda Kenya ayaa dooneysa iney dib u bilowdo dhismaha darbiga kala qeybin doona Kenya iyo Soomaaliya.